In ka badan 145 Arday oo ka Qalin-jabisay Jaamacada Green hope ee Magaalada Muqdisho (SAWIRRO) |
In ka badan 145 Arday oo ka Qalin-jabisay Jaamacada Green hope ee Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
Viagra Super Active without prescription, purchase dapoxetine.
Xaflad oo ay ka Qayb-galeen Mas’uuliyiin ka socotay Wasaaradaha Hiddaha iyo Tacliinta Sare, Wax-barashada, Caafimaadka, Daladaha Wax-barashada Dalka , Macalimiin, Ururada Jaamacadaha, Waaliddiin, Arday iyo Marti Sharaf kale ayaa ka dhacday Hotel Ambasadoor ee Muqdisho; munaasabaddan oo ku saabsanayd Qalin-jabinta ardey dhameystey Waxbarashada Jaamacada Green Hope.
Mustaf Macalin Cabdule oo Maamulaha Jaamacada Green Hope oo Halkaas ka jeediyay warbixin ku saabsan Jaamacada iyo Mustaqbalka waxa u Qorsheysan isagoo halkaas ka sheegey in Jaamacada lagu soo kordhiyey Kulliyado Cusub oo uu sheegay in wax ka dhigayaan Macalimiin Aqoontooda Sareysa islamarkaana Khibrad u leh sida wax loo baro ardayda.
Sidoo kale, Jamaad Axmed Xoosh oo ku Hadlay Magaca Ardeydii ka qalin-jabisay Green Hope Univeristy ayaa ugu horeyn u Mahadcelisay intii ku Gacansiisey inay maanta dhamaayeen Jaamacada, waxayna si gaar ah mahad ugu celisay maamulka, Macalimiinta iyo Waalidiintii Mudadaas fog Waxbarashada Gacan ku siinayay.
Waxaa isna ka hadlay Xafladda Macallin Muuse Faarax Xayd oo ah Madaxa Manaahijta Wasaarada Waxbarashada oo halkaa ka hadlay ayaa Dhallinyaradii iyo Martidii halkaa isugu timid ku guubaabiyay in ay mar waliba ay aqoontooda kor u qaadaan islamarkaan ay ka mira dhaliyaan ujeedooyinkooda ah inay Waxbarashadooda ugu adeegaan Dalka iyo dadka.
Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda Caafimaadka XFS, Cismaan Maxamuud Cabdi (Cismaan Daallo) oo isna ka Hadlay Munaasabadaas ayaa u Mahad-celiyay intii isku soo dubarid-day Xafladdaan, sidoo kale wuxuu sheegey in Wasaaradiisa ay gacan siin doonto; isla markaana ay shaqo u abuuri doonto Ardayda ka Qalin-jabisay Jaamacadda Green Hope.
Guddoomiyha Jaamiaadda Green Hope, Prof. Xuseen Tooxow Faarax oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa ka sheekeeyay Taariikhda Jaamacadda iyo heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay; isagoo si gaar ah ugu mahad-celiyay Ardeyda iyo Waalidiintooda oo u dhabar adeegay inay wax bartaan mudadaas dheer ee ay Waxbarashada soo Wadeen
Munaasbada Gunaanadkeedii ayaa waxaa ka hadlay Agaasimaha Wasaaradda Tacliinta Sare ee Dowlada Federaalka, Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo sheegey inay Wasaaraddiisa aad ugu faraxsan tahay in ardey gaareysa 145 ay maanta Qalin-jabiyaan Jaamacada Green Hope wuxuu sii raaciyay Agaasimaha.
“Arday fara badan baa maalin walba kasoo Qalin-jabisa Jaamacadaha Dalka; sidaa darteed waxaan naga go’an in ardeydaas aan u raadino shaqooyin si aysan uga niyad-jabin dhallin-yarada Soomaaliyeed Waxbarashada,” ayuu yiri Ismaaciil Yuusuf.
Ugu dambeyn, Ardaydii ka Qalin-jabisay Jaamacadda Green Hope waxaa halkaas lagu guddoonsiiyay Shahaadooyin Caddeynayaa Maadooyinkii ay barteen iyo abaal-marinno kala duwan oo la guddoonsiiyay Ardeydii ugu wanaagsanayd xilli Waxbarasheedka iyo kuwii dadaalka badan muujiyay sidoo kale Ardeydii ka qalin jabiyey Jaamacada ayaa Macalimiintooda Gudoonsiiyey Haddiyado Qaali ah.